Ndeipi mhedzisiro yezita raEdge? - Wwe
Edge akawana zita rake kubva kuAlbany, New York radio station. Akanga achityaira imomo paakanzwa chiteshi chedombo chinonzi Edge, uye chakanamatira kwaari.
Iri zita rakaguma rave sarudzo yakanaka sezvo iye aidiwa nevateveri kubva padhuze nepakutanga kwebasa rake.
Ko Edge akawanepi zita rake kubva?
Edge akazivisa panguva yemubvunzurudzo pakutanga kwebasa rake kuti akawana zita iri paaifungisisa musoro wenyaya uyu achityaira nemuAlbany achiteerera redhiyo. Mazita aakange apihwa neWWE haana kunyatsomukodzera. Aida kukakavadzana pasi pezita rake chairo asi, panguva iyoyo, izvo hazvina kunyatsoitwa muWWE:
mibvunzo yekubvunza yako yakakosha mumwe mutambo
Ndinoshuva dai yaive nyaya inotonhorera, haisi chokwadi. Panguva iyo muWWE yaive neRage neRiot, aya mazita akasiyana andisina kunyatsobatana nawo. Ini ndaingoda kuve Adam Copeland, asi panguva iyoyo munhu wese aive nezita. Saka ndanga ndichiteerera nhepfenyuro yeredhiyo. Ini ndaityaira nemuAlbany, New York. Yaive Edge 103.7 kana chimwe chinhu. Ndakaenda, 'Edge, izvo hazvina kunyanya kuipa.' Ndakamhanya nazvo ivo uye vaive vakaita seweEdge. Ndinoshuva kuti dai ndakafunga nezve chimwe chinhu chine ma syllable maviri ainyanyo kuimbwa sa, Ro-cky, Ho-gan, Aust-in. E-- eeedge. Hazvishande. Iye zvino ndiri kuenda kutarisira Rated-R, Rated-R. Ndozvandiri kutarisira, 'Edge akatsanangura.
Nekutenda kuEdge, iro zano rakashanda uye vateereri vakawana nzira yekuimba zita rake nguva zhinji pese paaiva pachiratidziro. Rated-R Superstar zita rakanamatira uye akazove mumwe weanodiwa zvikuru varwi wenguva dzese.
Kunze kwekunakidzwa kwePeep Show neChristian manheru ano uye Edge uye kusangana kwechiKristu. @wwe #WWERaw pic.twitter.com/HVQAhHxj6Z
zvinoratidza kuti waunoshanda naye anokwezva kwauri
- Fortminorproject ️‍⚧️🇵🇷♎️ (@GamerGirlDaphne) Chikumi 9, 2020
Vazhinji vateveri vakafunga kuti pane chakavanzika chirevo kuseri kwezita raEdge, asi pakanga pasina chaizvo. Paive nekufungidzira kuti neEdge, WWE yaireva kuti iyo nyenyedzi yaive kumucheto kwekupenga, uye paaiita basa rakanaka rekuratidzira psychopath pamatanho akasiyana ebasa rake, ichocho chaisave chikonzero chezita zvachose.
Ingo siya mifananidzo iyi yeEdge uye yechiKristu kugovana ino nguva panguva yeVarume ye2021 Royal Rumble pano pane yako nguva. (Pics kuburikidza neWWE) pic.twitter.com/sOirhEPNn1
- Denise Salcedo (@_denisesalcedo) Kukadzi 1, 2021
Zvinonakidza kufungidzira nezvekuti basa raEdge raizove rakasiyana zvakanyanya kana aine zita rakasiyana. Iyo superstar ichangodzokera kuSmackDown uye vakarwisa Kutonga kwevaRoma .
murume wangu anogara achitora divi remhuri yake
murume paanosiya mukadzi wake achienda kune mumwe mukadzi
maitiro ekuita kuti mumwe munhu akusuwa senge anopenga
ndiani cm punk akaroora
kutorwa zvisina basa muhukama
jojo offerman uye randy orton
maitiro ekuwana chokwadi chinonakidza pamusoro pako